China RGB Pocket Chiedza TC135A-RGB Kamera Mwenje Mini Mini Vhidhiyo Mwenje Panel Zadza Chiedza fekitori nevatengesi TEYELEEC
Simbi RGB / Rakajeka Chiedza | TC135A-RGB
RGB ruvara gamut:
0-360 ° yakazara ruvara (HSL)
90 maminetsi (100%, 5600K)
Chiedza chinoshanda mode:
RGB Pocket Chiedza TC135A-RGB Kamera Mwenje Mini LED Vhidhiyo Mwenje Panel Zadza Mwenje Uzere Ruvara Rinobuditsa Vhidhiyo Nyoro Mwenje 135pcs Lamp Mabheji ane Screen yeYouTube, Vlog, DSLR, Kunze, Smartphone Kupfura
Pashure: TC120AC-RGB Ruvara Zadza Chiedza 120pcs LED RGB Vhidhiyo Mwenje
Zvadaro: TC150AR-RGB Tenderera-inokwanisa RGB LED Yakazara Ruvara Kamera / Camcorder Chiedza
• [RGB Yakazara Ruvara Rinobuditsa LED Vhidhiyo Mwenje] RGB 0-360 yakazara ruvara, uye 1-100 gadziriso yekuzadza kwemavara, 9 anoshanda modes, 3200K-5600K kudzora tembiricha kudzora kwenzvimbo dzakawanda dzekupfura, Shandisa HD index mwenje marozari, RA≥96 ku ipa chaicho chaicho chiedza sosi yekupfura kwako.
• [Inogadzikana Dhizaivhu & Diki Saizi] Iyo Yese-Aluminium Alloy muviri chimiro chinodzivirira mwenje zvakanyanya chaizvo uye haina kureruka. Iyo idiki pane iPhone, zviri nyore kutakura neruoko rumwe uye inofanirwa kurongedza chinhu chebhegi rangu rekamera, diki kwazvo asi inoburitsa mwero wakanaka wechiedza. Iyo yakajairwa 1/4 sikuruu yakakodzera katatu uye kumira, zvakare neinotonhora shangu kukwira kumakamera kana DSLR nezvimwe.
• [Ridza Mavara ako Ekuratidzira neBhatani Chete] Chinja pakati pezviitiko zvipfumbamwe pasi pezvikamu zvitatu muZVIITIKO Mode, unogona kuwana mhedzisiro senge Ambulance Mwenje, Flash Light kana mwenje weKenduru Shading nekamwe-kudzvanya, pachinzvimbo chekomputa yakaoma. 360 ° Yakazara Ruvara uye anoshanda modes ichave ichiita yako kutora mifananidzo kuve yakajeka.
• [LCD Ratidza uye Li-Polymer Bhatiri] Yakavakirwa-mukati inokwidziridzwa 4000mAh Li-Polymer bhatiri, inogona kubhadhariswa kuburikidza ne USB port (USB Cable Inosanganisirwa). Zvimwe zvirinyore uye zvakanaka zvekunze, zvemukati kana zvehusiku basa rekupfura neyakajeka HD LCD pani ine readout yekukuzivisa iwe chaiwo marongero uye kuita kuti ishande nyore.
• [Yakakwirira Mhedzisiro Mhedzisiro Zvimiro] TC135A-RGB vhidhiyo mwenje yakanakisa kune mbozhanhare kupfura, kurekodha vhidhiyo, chigadzirwa kupfura, uye macro-kutora mifananidzo, nezvimwe. Chiedza chakareruka uye chinotakurika chinopa kupenya kwakakwirira, mashandiro akanaka uye chaiyo tembiricha tembiricha.
Max Kujekesa: 1200LUX / 0.5m 5600K
Yakavakwa-muLithium Bhatiri: 3.7V 4000mAh
Simba guru: 13W
Ruvara Kupisa renji: 3200-5600K
RGB color gamut: 0-360 ° yakazara Ruvara (HSL)
Nguva Yekushanda: 90 maminetsi (100%, 5600K)
Ruvara kupa Ra≥96 +
Chiedza chinoshanda mode: 21 modes
Dimming renji: 1-100%
Kuisa: USB-C 5V / 2A
Kubuda: USB 5V / 2A
Kurema kweNet: 200g
Kukura: 151 * 80 * 11.5mm